केन्डल जेनरबाट उत्कृष्ट उद्धरणहरू - Victor Mochere
केन्डल जेनर भन्दा उत्तम उद्धरण
केन्डल निकोल जेनर एक अमेरिकी मिडिया व्यक्तित्व, सोशलाइट, र मोडेल हुन्। जेनरको जन्म क्याटलिन जेनर र क्रिस जेनरमा भएको थियो, र रियालिटी टेलिभिजन कार्यक्रम किपिङ अप विथ द कार्दशियन्समा प्रसिद्धिमा पुग्यो। कमर्शियल प्रिन्ट विज्ञापन अभियानहरू र फोटोसुटहरूमा काम गरिसकेपछि, जेनरले 2014 र 2015 मा ब्रेकआउट सिजनहरू थिए, न्यूयोर्क, मिलान र पेरिस फेसन सप्ताहहरूमा उच्च-फेशन डिजाइनरहरूको लागि रनवेमा हिंड्दै।
केन्डल जेनरबाट केहि उत्कृष्ट उद्धरणहरू सूचीबद्ध छन्।
"म रातबाट बाहिर जान्छु र आफैलाई हेर्छु र यसलाई सराहना गर्दछु। म अजीब को त्यो ठूलो नहीं हूँ, तर कहिले काँही। " - केन्डल जेनर
"मलाई एक बच्चा बन्छ र मेकअप अप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र यो यति खराब भएको छ - तर मेरी बहिनी केली धेरै राम्रो थियो। यो उनको स्वाभाविक रूपमा आयो। मेरो लागि, यो कहिल्यै प्राकृतिक थियो। " - केन्डल जेनर
"मलाई लाग्छ सोही सोधिने प्रश्नले हाम्रो पीडितको लागि सोचेको छ। यो हाम्रो जीवनको ठूलो भाग हो, र यो दयालु हो। " - केन्डल जेनर
"म सबै भन्दा राम्रो प्रयास गर्दछु, तर एकै समयमा, म कसैको जीवनमा असर पार्ने व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तै, म बाहिर जान चाहन्छु र एक साथी हो जो एक मित्र संग एक सुचारु चोरी, म Paparazzi मलाई त्यस गरेर रोक्न र मेरो जीवन जी र केवल एक साधारण व्यक्ति हुन दिइने छैन। " - केन्डल जेनर
"म मेरो फिल्टर सरल राख्न कोसिस गर्छु। मेरो फोटोहरूमा कुनै पनि प्रमुख छैन। " - केन्डल जेनर
"मैले पाङ्ग्राहरूमा खाना खालेर स्वेच्छामा राखेँ, जो ठाउँ हो जहाँ तपाईं जानुहुन्छ र घरपरिवार हुने मानिसहरूका लागि स्वस्थ भोजन दिनहुन्छ। म त्यो गरे, र म यो धेरै मजेदार थियो, र म निश्चित रूप देखि यसलाई गर्न को लागि योजना बना रहयो हूँ। " - केन्डल जेनर
"म मोडलिंग जारी राख्न चाहन्छु र त्यसो गर्न सक्छु कि म संग सक्छु।" - केन्डल जेनर
"म कुनै पनि कारणको लागि सबैभन्दा ठूलो झूटा थियो, र त्यस पछि मैले बूढो भए, मैले सोचे, 'म किन सबैलाई झूट बोल्छु?' मैले सुनेको थिएँ अरू मान्छेले झूट र मन पराउँछन्, 'तिमीले धेरै बेवकूफ बोल्छौ।' त्यसो भए म केवल मेरो झूटा परिवर्तन गर्दछु। जब म झूटो एक मात्र व्यक्ति मेरो सानो बहिनी हो, मैले उनको लुगा चोर्ने बेलामा। " - केन्डल जेनर
"म अजीब रूपमा आन्तरिक डिजाइन र अचल सम्पत्ति र सबैलाई माया गर्छु। म वास्तवमा गर्छु। म यो देखि चिसो पाउँछु। " - केन्डल जेनर
"यो मेरो व्यक्तिगत जीवनमा आउँदा एक धेरै वफादार र धेरै निजी व्यक्ति हुँ। तर म स्पष्ट रुपमा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा छु, र म केहि गरेर केहि चीजहरू साझा गर्नेछु। " - केन्डल जेनर
"म भाग्यमानी छु कि म व्यक्तिगत रूपमा बिरामी भएको छु। त्यहाँ सँधै बच्चा बन्न लागेका हुन्छन् र सामानहरू भन्नुहुन्छ, तर तपाईले तपाईलाई मनपर्ने व्यक्तिहरू - तपाईलाई मनपर्ने व्यक्तिहरू, तपाईंको आमाबाबु, भाइबहिनी र साथीहरू जस्तै - ती मानिसहरू हो जुन तपाईं सुन्नुपर्छ। " - केन्डल जेनर
"म मेरो उत्तम के गर्ने प्रयास गरिरहेको छु, म मोडेलिंग गर्दैछु। मलाई लाग्छ कि म आफ्नै क्यारियर मार्गमा छु, र म साँच्चै हेरचाह गर्दैनु कि अरू मानिसहरूले मेरो बहिनीहरूको सुन्दरीमा के बारेमा भन्न चाहन्छन्। म बस आफ्नो काम गर्दैछु। " - केन्डल जेनर
"यदि म एक दिन को लागि मेरी बहिनीहरु संग स्थानहरु व्यापार गर्न सक्छ, यो किम हुनेछ। म यो जान चाहन्छु कि ... यो सुत्ने एक पटक मात्र हवाई जहाजमा छ। यो केवल पागल छ। मलाई उनको लागि खराब छ, तर म अझै जान्न चाहन्छु कि यो के जस्तै छ। " - केन्डल जेनर
"यदि मैले ट्विटरमा साँच्चिकै गन्दा देखेको छु, म सामान्यतया यसलाई हटाउन वा व्यक्तिलाई अवरोध गर्दछु, किनभने म हरेक दिन हेर्न चाहन्न ... मलाई जान्न पाउनुहोस्, र त्यसपछि तपाईं मेरो बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ!" - केन्डल जेनर
"यो सबै कुरा रोल्दै चाँडै छिटो सोच्न डरलाग्दो छ, र तपाई यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न।" - केन्डल जेनर
"यो सत्य हो, म धेरै शर्मीला हुन थाल्यो। म कहिल्यै बोल्दैन, बस फेरि बस्न र मेरो कुरा गर्छु। म कहिल्यै कहिल्यै विलम्बित भएन, यद्यपि, यो कहिल्यै मनपर्थ्यो कि 'निश्चित' हुन आवश्यक कुरा थियो, शर्मीली जस्तो एक खराब कुरा हो। " - केन्डल जेनर
"मोडलिङ कुनै कुरा हो जुन म गलत व्यक्ति प्रमाणित गर्न चाहन्छु। यो केहि गरिरहेको छु किनभने यो के गर्न चाहन्छु। " - केन्डल जेनर
"मेरो बुबा मेरो बुबा हो, तर त्यहाँ शारीरिक रूपमा अब छैन। तर उनले मलाई उनको बुबालाई फोन गर्न दिईयो - यो पिताको अन्तिम सानो टुक्रा मैले पाएको छु। " - केन्डल जेनर
"फोटो शूट गर्ने बारे मेरो मनपर्ने कुरा मात्र मजा गर्न, नयाँ व्यक्तिहरू भेट्न, ड्रेस अप गर्न सक्षम छ, र म यो मात्र मन पराउँछु। त्यसैले, मेरो धेरै रमाइलो छ। " - केन्डल जेनर
"मेरो आमाबाबुले मलाई सिकाउनुभयो कि नैतिक काम जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुञ्जीहरू हो, र म यो विश्वास गर्दछु।" - केन्डल जेनर
"मेरो स्टाइल प्रतिमा वास्तवमा मेरा तीन बहिनी हो। म तिनीहरूका ड्रेस र रास्ते जसलाई तिनीहरूले सँगै राख्नुहुन्छ माया गर्छु। म निश्चित रूप देखि मेरो भन्दा धेरै शैली प्राप्त गर्छन। " - केन्डल जेनर
"कहिलेकाहीँ म एक्लै छोड्न चाहन्छु र सामान्य बच्चा बन्न चाहन्छु, जस्तै, पाँच मिनेट। जब पिपार्जीजीले तपाईंलाई पीछा गरिरहेको छ यो कठिन छ। " - केन्डल जेनर
"पहिलो पटक मैले सम्झना गरे किट मास र माचि मार्कको साथ थियो। सम्भवतः सबैभन्दा प्रतिष्ठित जीन्सहरू पनि विज्ञापन गर्छन्। " - केन्डल जेनर
"मेरो बारेमा धेरै कष्टप्रद चीजहरू छन्। मलाई थाहा छैन, म वास्तवमा पहिलो पटक शर्मीला छु, र म यसलाई साँच्चै मनपर्दैन। म एकदम बढि बाहिर जान्छु। " - केन्डल जेनर
"कुन व्यक्तिहरूले बुझ्दैनन् कि कसैलाई पनि पतले बोलाएर पनि धेरै चिया बोलाएर बोल्छ; यो राम्रो महसुस छैन। " - केन्डल जेनर
"तपाईं लाखौं टिप्पणीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ कति सुन्दर हुनुहुन्छ र कति महान् हुनुहुन्छ तपाइँ कति हुनुहुन्छ, तर एक टिप्पणी भन्छ कि उनीहरूले तपाईंलाई घृणा गर्दछ र तपाईं बदसूरत हो कि छ।" - केन्डल जेनर
"तपाईं यस व्यवसायमा कुनै व्यक्तिगत रूपमा लिन सक्नुहुन्न। आफ्नो सपना पालन गर्नुहोस्, तर त्यहाँ धेरै आलोचनाहरू छन्। तपाईंले यसलाई ब्रश गर्न सक्नुहुन्छ। सबैले केहि फरक खोज्दैछन्। " - केन्डल जेनर
"तपाईं कुनै पनि विचार छैन कि कति ढोकाहरु मेरो मा बन्द र कति वयस्कों को शुरुवात मा मेरो साथ काम गर्ने मौका लिन को लागि अनिंछित थिए या जो मेरी पछाडि मेरो पछि हल्लाए।" - केन्डल जेनर
केन्डल जेनर नेट वर्थ २०२०
काइली जेनर नेट वर्थ २०२०